Taorian’ny roa taona teo ho eo izay nifantoka bebe kokoa tamin’ny votoaty sy ny teknolojia an-tserasera dia tsapako fa amin’ny lafiny maro, rəqəmsal iş daka afaka misaina lalina kokoa amin’ny asa mahazatra nentim-paha. Maka ohatra domenina izots mirotsaka ao-tsaiko amin’ny fiheverana nan fananana trano.
Raha mividy trano ianao, dia mividy trano iray toy ny trano na tranom-barotra amin’ny vidiny tsara ary manangona azy amin’ny vidiny ambony. Ny domen sürüşmə diasa miasa amin’ny foto-pitsipika mityy ary mety ho toy ny mahazendana mahasoa, raha tsy izany.
Ireto misy ohatra sasantsasany momba ny anaran-tserasera nalefa ho an’ny vola be;
Insure.com üçün $ 16 pul tapın
360.com üçün 17 dollar tapın
Sığorta.com, yeni satışa 35,6 dollar qazandırır
Mahatalanjona ireo tarehimarika ireo, sa tsy izany? Nefa alohan’ny handosirana sy hividianana anaran-doka oyuncaq ny adala dia misy zavatra roa tokony ho fantatrao momba ny seha-pamokarana.
1 Fantaro ny fomba hanombanana ny hasarobidin’ny anaran’olona iray
1.1 1. uzadılması
1.2 2. Longenan’ny anarana
1.3 3. Fanamboarana anaran’anarana
1.4 4. Mitovitovy amin’ny zavatra iainana
2 Manimba trotraka ny domelina
2.1 Tetikasa fanombohana
3 Mandosira ny domenləri
3.1 1 – Ahoana heç bir fividianana anaran-tsehatra
3.3 Premium Domain Market
3.4 2 – Ahoana yoxdur hivarotana ny anaran-toerana?
3.5 Birbaşa yanaşma
3.6 Domain Marketplace
Fantaro ny fomba hanombanana ny hasarobidin’ny anaran’olona iray
Fividianana anaran-tserasera dia tsy mora tahaka ny fanangonana anarana mahazatra ary manantena fa hiakatra avokoa izy ireo. Mba hametrahana azy amin’ny famolavolana azy, dia misy ny zavakanto manintona sy ny siansa vitsivitsy ao ambadiky ny adala. Tondra-drano tsara indrindra dia mametraka eritreritra və fahalalana maro amin’ny fividianany.
Raha mieritreritra ianao fa ny fametrahana mari-pankasitrahana ho an’ny sehatra iray dia oyuncaq fil filana, diso ianao. Ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia nametraka sehatra iray tamin’ny alalan’ny dingana fanombanana talohan’ny fampiasana vola. Mpampiasa sy orinasa maro heç bir manolotra itiv serivisy ity. Ny valim-pifidianana dia mifototra amin’ny marimaritra iraisana toy ny taona, n halavany, ny fitadiavana fikarohana, n e-varotra e-varotra ary ny mety ho valin’ny ho avy.
Ireto no zavatra ilainao hodinihina:
Heç bir şey yox. Fanatana ny anaran’ny sehatra iray, iza fantatra amin’ny anarana hoe sehatra ambony indrindra (TLD).
Tsy ny TLD-lər heç bir mitovy ary ny sasany dia sarobidy kokoa. Ohatra, raha mandinika və ya TLDs irery, neh sehenry ny firenena (tahaka ny .za) dia tsy ho sarobidy ho oyuncaq və standart TLD .com.
2. Longenan’ny anarana
TheSpaceForSale.com saytına bir oyuncaq və ya hevitra hədiyyə etmirəm. Raiso ohatra sex.com üçün 13 $ pul tapın. Ny teny iray monja amin’ny teny tokana dia matetika mandidy vola be.
3. Fanamboarana anaran’anarana
Toy izany ihany koa amin’ny foto-kevitra momba ny halavan’y anarana araka izay voalaza etsy ambony, ny manana anarana nomena anana anana izay tsy misy ny kofehy na ireo karazana tsy mahazatra dia tsara kokoa.
4. Mitovitovy amin’ny zavatra iainana
Rehefa miverina amin’ny fitsipiky ny mpividy an-tsitrapo, mpividy an-tsitrapo, nana manana ny lanjany, ny anaran’ny sehatra dia tsy maintsy manana mpividy mety. Eritrereto ny fahazoan-dàlana sy ny fitoviana amin’ny fitovitoviana amin’ny anaran’ny sehatr’olona izay tianao hikombohana ar mampitaha izany amin’ny mpividy mety.
Amin’ny ankapobeny, rehefa mividy ny anaranao manokana ianao, dia ampirisihina ny olona mba hisafidy zavatra haingana sy malefaka. Anton’izany dia noho izy manana pizzazz. Miantso ny antso ho an’ny sehatra anaran-tserasera aho fa pizzazz izany, satria izany heç bir meto ho vitany amin’ny maha-marika azy.
Erikereto ny Nate ohatra; fohy, ana, ary amin’izao foto izao dia marika marobe mitentina arivoarivo.
Mazava ho azy fa misy fiheverana hafa rehefa misafidy anarana nomena hividianana, noho izani dia fikarohana sy traikefa kely no mialoha ny handehananao any amin’ny sehatra vaovao anaba anao..
Manimba trotraka ny domelina
Qeyri-adi, oyuncaq və fananan-trano mihidy, dia misy loza mety hitranga ao an-toerana. Azoko antoka fa misy ireo avy hər hansı bir izan manangom-uşaq avy amin’ny sehatra midadasika, fa amin’ny fahamendrehana marina, ny fametahana ny jirofo amin’ny anarana dia tena manohina sy mandeha.
Na dia ratsy kokoa aza ireo izay tsy miomana amin’ny raharaham-barotra ary mamarana amin’ny andiana albatross nomena anarana. Ireo dia anaran-tserasera izay tsy azonao omena mihitsy aza ny olona hanaisotra ny tananao.
Avelao aho hanao izany mazava: Tahaka na raharaham-barotra hafa rehetra, seha-pifamoivoizana dia mitaky fahalalana, traikefa ary vintana. Aza miditra amin’ny raharaham-barotra manantena ny hiverina ho mpilomano amin’ny alina!
Miomàna toy ny hoe manomboka amin’ny orinasa hafa. Fantaro ny varotra, fantaro ny fetran’ny fonenanao, mahafantatra ny fepetra momba ny kapila, sns. Raha fintinina, ataovy toy ny zava-misy izy fa tsy nofinofy.
Araka ny voalaza terỳ aloha, nah fahafantarana ny sanda mety ho an’ny anaran’ny sehatra dia fahaizana tena sarobidy. Amin’ny fanarahana ny toro-làlana fototra oyuncaq ireo izay voatanisa etsy ambony ary avy amin’ny fikarohana nataonao manokana, di afaka manangona anarana ianao izay manolotra fahafahana bebe kokoa ho azy ireo aminyok amena amino amana’y ameny ama’y ameny amena. Tacidio fa ny türbəsi avy amin’ny $ 100 mbola türbəsi, tokony hanomboka iano hər hansı bir.
Ankoatra ireo toerana ividiananao sy fivarotana anaran-tserasera, misy orinasa sasany manohana ny raharaham-barotry ny sehatra. GoDaddy dia iray amin’ireo anarana lehibe misy anao. Hər hansı bir, tsy vitan’ny hoe nomena sehatra varotra fotsiny ianao, fa hikaroka izay efa novidinao. Fividianana, fiara sy fivarotana dia tsy dia mampalahelo loatra ary ny zavatra rehetra tokony hafoinao dia kely isan-jato amin’ny vidin’ny varotrao.
Manan-danja ny habeny
Raha te ho eo amin’ny sehatry ny faritra ianao dia mila miomana ny hitazona anarana manan-danja maro ao amin’ny portfelo. Ireo anaran-sehatra ireo dia tokony hotsinjaraina araka ny tokony ho izy, ka na dia mivarotra ampahany amin fotsiny aza ianao, dia mety hanome anao tombontsoa ho an’ny fidiram-bola sasany ny hafa.
Mitandrema ny sehatra misy orinasa toy ny GoDaddy mamela anao hanararaotra ny fandaharan’asany amin’ny volam-bahoaka ary mahazo vola amin’ny alalan’ny rohy avy amin’ny fikambanana.
Ataovy azo antoka fa fantaziya n olona fa mivarotra ny sehatr’asa ary inona no vidiny! Tsy hino ianao firy ny olona maro nifanena tamiko izay vao novidin’ireo anarana nomena anarana arip nipetraka teo amin’izy ireo, nanantena ny hivarotra. Ahoana, tsy azoko an-tsaina. Noho izany, ataovy azo antoka fa tsy manao io hadisoana io ianao ary tanisao ny sehatr’asanao mba hivarotanao miaraka amin’ny mari-pana tsara.
Fantaro ny vidiny mety ho an’ny sehatr’asa misy anao.
Tsy mora ny asa, nefa hahatonga anao ho azo antoka fa tsy hodoranao amin’ny asa rehetra ataonao. Heç ailatrarana tomban’ezaka dia mety ahitana antony maro, oyuncaq ny lanjan’ny anarana, ny tsena mety ary ny maro kokoa. Orinasa sasany oyuncaq və SmartName ilə afaka manampy anao handanjalanja ya sehatra misy anao, fa som bitika ihany rehefa manaiky ny mpanjifa.
GoDaddy amin’ny lafiny iray dia manana fitaovana valim-panavotana maimaimpoana izay misokatra ho an’ny rehetra. Manoro hevitra anao aho mba hanome azy ny ezaka voalohany ary mety hampiasa zavatra toy izany ho toy ny hevitra faharoa. Izany dia hanampy amin’ny fianarana əyri.
Mandosira ny domenləri
1 – Ahoana heç bir fividianana anaran-tsehatra
Misy ny anaran-tserasera ary misy sehatra anarana.
Mənim fahasamihafana dia tsy maintsy mividy ity farany amin’ny tranonkala izay manokana ny anarana nomena anarana efa manana. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin’ny teny esperanto
Domain Market, lisitr’ireo anarana nomren anarana və vidiny
Ohatra roa tsara amin’ny toerana izay ahafahanao mividy nomena anaran’olona izay efa manana izany Namecheap ary GoDaddy. Ireo tranonkala roa ireo dia manana tsenam-barim-panjakana izay mitovy lisitry ny lisitra. Azonao atao ny mijery sy mividy azy ireo eto amin’ity tsena ity.
Tranom-boninahitra maromaro mivoaka avy amin’ny fivarotana və ain amin’ny marka çömçə.
No iray hafa dia Brand Bucket izay manolotra etibarlı mifantina kokoa amin’ny anaran’ny sehatra mükafatı. Ireo nomeraon-drakana ireo dia voatahiry manokana avy amin’ny anaran’ny mpanamboatra nomena anarana ary mety ho loharano tena ilaina raha mividy zavatra iray tsy manam-paharoa.
Ohatra iray hafa momba ny loharano nomerao və sehatra nomerao BuyDomains.com izay mametraka ny masomboly amin’ny voankazo. Amin’ny alalan’ity tranonkala ity dia azonao atao ny miditra ny anaran’ny sehatra tianao ary na dia tsy misy aza izany dia afaka manampy amin’ny fanamiana ny fividianana izany.
Raha te hikaroka və anaran-tserasera dia midira ao amin’ny qayıqlı fikarohana.
Ireto misy anaran-çarimihetsika "mahağa" hitako.
Fanamarihana- Miresaka momba ilay mpiara-miasa malalako Azren Azmi Ahoana heç bir dividianana anaran’olona avy amin’ny tompona iray eto – Mamaky azy io raha ilaina ny tari-dalalalan’ny fividianana sehatra virtualı.
2 – Ahoana yoxdur hivarotana ny anaran-toerana?
Toy ny fivarotana fiara, afaka manolo-tena amin’ny mpividy mety ianao ary manao toy ny mpivarotra fiara. İzany dia mitaky fikarohana fikarohana sy legioma fanampiny, yaxşı meto ho fomba tsara handosirana sehatra nic kokoa.
Amin’ny lafiny iray, azonao atao ny mifantoka amin’ny fivarotana an-tsehatrao ary mametaka azy tsara. Ho an’ny iray hafa, satria fantatrao fa misy ny orinasa iray, dia azonao atao ny maka ny vidiny kely. Farany, amin’ny fivarotana ny sehrra mivantana, dia tsy voatery handoa vola amin’ny mpanelanelana oyuncaq ny tsenan’ny sehatra.
GoDaddy dia manana fitaovana fanaraha-maso malalaka.
Tahaka ny lisitry ny fananana, afa-tsy ny tsena tsotra, sehatry ny sehatry ny sehatra dia ny lisitry ny anaran-danjam-pamokarana olmaq indrindra. Nam fampiasana azy ireo dia tsotra. Mividy sehatra iray ary zarao izany, dia tanisao ny sehatra misy anao eo amin’ny tsenan’ny vidin-tsolika izay tianao omena azy. Raha vantany və amidy ny sehrra, makena tsena ny toeram-pivarotana ary mandalo ny vola sisa tavela aminao.
Ney tsenam-pambolena samihafa dia mitaky ny isan-jaton’ny komisiona ary manana fepetra sy fepetra manokana. Ohatra, ny sasany dia mitaky ny fanavakavahana, izay midika hoe raha misy lisitra misy azy ianao, dia tsy afaka mitanisa izany na aiza na aiza. Ireto misy tsenan-tseranana sasantsasany hanamarina izany. Maka fotoana kely hahitanao izay mahasoa anao.
Veb sayt: https://sedo.om/us/
Tsy mihoatra ny sehatry ny sehatra nomena ihany, Sedo dia ahafahanao mandray anjara amin’ny serivisy mpampindram-bola nomena anao. Ireo manam-pahaizana ireo dia afaka manampy anao hahita ny anaran’ny sehatra mahitsy fa tsy amin’ny raharaham-barotra, fa na dia ny anaran-tambajotra na fanentanana manokana aza..
Rehefa avy namaky ny zavatra nosoratako aho, manantena aho fa hanaisotra ny singa manan-danja izay nokatsahiko hampidirana, ary izany dia ny zava-misy. Tsy misy olana amin’ny faniriana ambony sy ny nofinofin’ny renim-pianakaviana, yaxşı bir maka fepetra hentitra amin’ny ankapobeny.
Raha manaja ny sehatra mifehy ny raharaham-barotra ianao ary manahaka azy tahaka ny firoboroboana hafa entin’ny vola miditra dia miditra amin’ny lozam-piaramanidina. Raha mbola mijanona eny am-pigadrana mandritra ny raharaham-barotra iao, dia misy foana ny vintana amin’io vidim-bolo folo tapitrisa dolara io eo amin’ny vatanao androany.!
Taorian’ny roa taona teo ho eo izay nifantoka bebe kokoa tamin’ny votoaty sy ny
Mba hananana tranonkala iray，mila zavatra telo ianao：anarana域，fampiantranoana tranonkala和tran tranonkala mandroso。 Fa inona ny anaran’ny域？